2 nin oo ku dilay Boosaaso Taliye Mursal Xaaji Saleebaan oo dil lagu fuliyey
Waxaa maanta si rasmi uu u shaaciyey wasiirka amniga ee Puntland Col.Khaliif Ciise Mudan in 2-bo ruux oo ku eedeysnaa in ay dileen allaha u naxariistee taliyihii ciidanka Ilaalada hay’adaha ajaanibta ah ee Puntland SPU Taliye Mursal Xaaji Saleebaan lagu fuliyey dil toogasho ah ka dib markii ay qirteen kuna cadaatay in ay fuliyeen qaraxii miinada ahaa ee lagu dilay Taliye Mursal.
Ciidanka Booliska ee magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari ayaa howl galo ay ka fuliyeen xaafada Raf iyo Raaxo waxaa ay ku soo qabteen labo dhalinyaro ah oo dhagarqabayaasha ah ka dib markii ciidanku ay heleen xog ku saaban guriga ay ku dhuumanayaan labadaan ruux iyagoo ciidanku uu gacan ka hellay dadweynaha reer Boosaaso.
Wasiirka amniga dowllada Puntland Col.Khaliif Ciise Mudan oo saaka saxaafada la hadlay ayaa sheegay in maalintii Khamiista ee la soo dhaafay ay ciidanku fuliyeen xukun dil ah kuna fuliyeen rag dil u geystay Sarkaal ka tirsanaa Hay,adda SPU xili uu ku guda jiray howlihiisa shaqo , Wasiirka amniga Puntlland Col.Khaliif Ciise ayaa sidoo kale xusay in ay jiraan rag kale oo dhawaan la horkeeni doono Maxkamada si xukun loogu qaado.
Wasiirka amniga dowlada Puntlland Col.Khaliif Ciise Mudan ayaa waxaa uu ugu baaqy dadweynaha ku nool degaanada Puntlland in ay ilaaliyaan nabadgelyada lana shaqeeyaan ciidanka amaanka si looga hortago dadka doonaya in ay qaraxyo iyo dilal ka fuliyeen degaanada Puntllánd si ay u wiiqaan amaanka iyo nabadgelyada ka jirta Puntlland.
Wasiirada amniga Puntlland ayaa horay u shaacisay in ay qabteen ilaa 7 qof oo dil ugu geystay magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari Marxuun Sh. Dr Axmed Xaaji Cabdiraxmaan kuwaas oo hadda ay ciidanku amnigu gacanta ku hayaan, dadweynaha ku dhaqan degaanada Puntlland gaar ahaan magaalada Boosaaso ayaa aad u soo dhaweeyey dilka lagu fuliyey dad gacan ku dhiig layaal ah oo dil ka geystay magaalada Boosaaso.